Zimbabwean: Money billboard - Creative Criminals
Zimbabwean: Money billboard9
The money in Zimbabwe is almost worthless. The paper is worth more than the actual note due to the high inflation! This is caused by the corrupt regime of Mugabe, he has been the president of the country since 1987.
This campaign was created for The Zimbabwean, a newspaper that is runned by exiled Zimbabwean journalists and is sold in the UK, South Africa and Zimbabwe.
“This note cannot buy anything, not even a loaf of bread and certainly not any advertising, but it can become the advertising, it can be a powerful reminder about Zimbabwe’s plight and the need to hold someone accountable.”
Zimbabwean: Grand prix award
Remember the campaign that Rindert posted of ‘ The Zimbabwean ‘ a couple of months ago? This campaign was created for The Zimbabwean, a newspaper that is runned by exiled Zimbabwean journalists and is sold in the UK, South Africa and Zimbabwe.
Zimbabwean : Grand prix award
Agency: TBWA\_Hunt\_Lascaris, Cape Town